Jiilaalka koowaad ee xilliga wuxuu ku dhacay gobolka Yedikuyular inta lagu jiro bilaha jiilaalka. Sannadkii hore faaiidada ugu horreysa ee gobolka 26 wuxuu hoos u dhacay Oktoobar iyo sannadkan 27 ayaa hoos u dhacay bishii Nofembar iyadoo dib loo dhigay bil. jiilaalka [More ...]
Duqa magaalada Güngör wuxuu cadeeyay in u diyaar garowga xilliyeedka uu kusocdo Yedikuyular Ski Center wuxuuna intaa raaciyay: yerine Waxaan dhiseynaa guryo iib ah oo cusub oo adeeg fiican uheli doona martidayaga halkii aan kaheli laheyn qaab dhismeedka caadiga ah ee cunida iyo cabitaanka gobolka. Tas-hiilaad cusub [More ...]
Kahramanmaraş Dawlada Hoose ee Yedikuyular Ski Center, gaar ahaan halbowlaha siinaya marin u helida xaafada Bertiz waxay bilaabatay howlo firfircoon. Howlaha batroolka waxay ka bilaabeen Wadada 'Yedikuyular Road dhexdeeda iyada oo lafiirinayo dhismaha wadooyinka Dowlada Hoose ee Magaalada iyo howlaha dayactirka. [More ...]
Kahramanmaraş Dawlada Hoose ee Magaalo Xeebeedka iyo Masiibooyinka Gobolka iyo Agaasinka Xaaladaha Degdega ah oo kaashanaya kooxaha samatabbixinta ayaa la siiyay tababbarka ficil ah. Kahramanmaraş Dawlada Hoose ee Magaalada, Waaxda Arimaha Sayniska [More ...]
Soo noqoshada martida ee Yedikuyular
Qulqulka booqdayaasha Yedikuyular Ski Center, oo ay dhistay Kahramanmaraş Dawlada Hoose ee Magaalada, ayaa wali socota. Yedikuyular Ski Center, halkaas oo qoysasku ku qulquleen iskuulada galaya fasaxa semesterka [More ...]
Xarunta Yedikuyukar Ski ayaa maalmihii ugu dambeeyay la xiriirta wararka lagu daabacay qaar ka mid ah xubnaha Degmooyinka Magaalada Kahramanmaras oo laga dhigay baraha bulshada. Bayaanka qoraalka ah ee Yedikuyukar Ski Center ee Magaaladda Metropolitan: “Dhawaan [More ...]
Shirka Beeraha iyo Dhirta Kahramanmara Forestry ee looga hadlayo kaqayb galka kulanka Wasiirka Beeraha iyo Dhirta Kahramanmaras. Bekir Pakdemirli, Kahramanmaras Dawlada Hoose ee Magaalo Weynaha ayaa muujisay sida ay ugu qanacsantahay adeegyada Dowlada Hoose ee Magaaladda [More ...]
Dhismaha Xarunta Dhexe ee Kahramanmaraş Yedikuyular Ski Center oo shaqadu ku bilaabatay xawaare buuxa. Kahramanmaraş Dawlada Hoose ee Magaalooyinka, Agaasinka Sahanka iyo Waaxda Mashaariicda [More ...]